Carnival yekushanda pa75% yeFleet Unyanzvi pakupera kwa2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Carnival yekushanda pa75% yeFleet Unyanzvi pakupera kwa2021
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Carnival iri kuenderera mberi nekuvaka simba rekutangazve zororo reruwa nemaziviso akaziviswa kusvika parizvino pazvikepe makumi mashanu nemana kusvika pakupera kwa54 pamasere masere emitsetse yaro.
AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises (UK) neSeabourn vazivisa zvirongwa zvekutangazve mashandiro evashanyi.
Pamwe chete, iwo mabhenji ari kuenderera mberi nekuitazve mashandiro kubva kuzviteshi zvengarava kutenderera pasirese vachishandisa zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma maitiro
Iwo ma cruises anosanganisira akagadziridzwa ehutano maprotocol akagadzirwa pamwe chete nehurumende nehutano zviremera.
Carnival Corporation & plc nhasi yazivisa kuti inotarisira kuenderera mberi nekushanya kwevaenzi pamwe ne65% yehuwandu hwayo hwese panopera 2021 pamasere ayo masere epasi-anotungamira eruwa rwezvikepe. Pamusoro pezvo, Carnival Cruise Line yakazivisa zvirongwa zvinofungidzira kuti zvikepe zvese zvinodzoka kusevhisi pakupera kwa2021, izvo zvaizowedzera kuwedzera huwandu hwekushanda kweCarnival Corporation kusvika padanho re75% pakupera kwegore.
Eight yemakambani mapfumbamwe emakambani - AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises (UK) uye Seabourn - vazivisa zvirongwa zvekutangazve mashandiro evaenzi pazvikepe makumi mashanu neshanu kusvika parizvino pakupera kwa54, nehafu yenguva yechinzvimbo chinomiririrwa nezvikepe zvakadzorerwa kuUS Kuwedzera kune izvo zvikepe zvakaziviswa kare. nemhando dzekambani, Carnival Cruise LineChinangwa chekudzoka kuzere rengarava sevhisi muna 2021 chaizowedzera imwe pfumbamwe, zvikepe makumi matanhatu nenomwe kusvika pari zvino zvinotarisirwa kutangazve mashandiro evashanyi gore rino. Zvakare zviziviso zvekutangazve zvigadzirwa zvinotarisirwa mumavhiki anotevera, kusanganisira zvirongwa zvekumisazve zvimwe zvikepe uye mafambiro e63.
Pamwe chete, iwo mabhenji ari kuenderera mberi nekutangisa mashandiro kubva kuzviteshi zvengarava pasirese vachishandisa zvishoma nezvishoma nzira, kusanganisira kufamba muUS, Caribbean, Europe neMediterranean, pamwe nemafambiro akarongwa muCentral America nekuAntarctica, pakati pevamwe. Iwo mafambiro echikepe anosanganisira akasimbiswa ehutano maprotocol akagadzirwa pamwe chete nehurumende nehutano zviremera, uye kuziviswa nehungwaru kubva kukambani yeruzhinji hutano, epidemiological uye mutemo nyanzvi.
Izvi zvinotevera zvinopfupisa zviziviso zveCarnival Corporation zvekutanga patsva kusvika parinopera 2021.